Beerta | January 2020
Isticmaalka suufka, faa'iidooyinka iyo waxyeelada caafimaadka aadanaha
Mulberry (Moraceae) - warshad ka tirsan caleenta Mulberry (waxaa loo yaqaan "dhiiq", geed dhererkiisu gaaro 20 mitir). Cudurkaan waxaa ku jira in ka badan 17 subax oo dhir ah oo guryahooda yaryar ay yihiin Persia. Waa sahlan tahay in la aqoonsado dhuxul: waxa uu leeyahay caleemo calsan, u egtahay lakabyo, iyo berry oo u eg sida madow.
Quince: degitaanka iyo daryeelka
On sale waxaa badanaa laga helaa miro waaweyn oo udgoon oo udgoon, sida tufaax ama isteroberi, loo yaqaan "quince". Waxay leedahay faa'iidooyin badan oo faa'iido leh, laakiin ugu saameynta ugu fiican ee warshadda waa lagama maarmaan in la helo xaalado wanaagsan oo kor loogu kaco iyo horumar. Aan isku dayno inaan ogaano waxa uu quince yahay iyo sida loo daryeelo si habboon.
Sida loo abuuro oo u koro irgu beertaada
Waxay badanaaba dhacdaa in dhirta furfuran ee u baahan daryeel iyo daryeel joogto ah la siiyo fiiro dheeraad ah, oo aan qabyo ahayn waxaa lagu daaweeyaa halkii si taxadar la'aan ah. Waa dhaqankaas oo kale waa irga. Sida caadiga ah waxaa laga arki karaa meel ku taal bannaanka xaafada. Laakiin cid kastaa way ogyihiin in irga uu yahay warshad qurux badan, oo lagu qiimeeyo dalal badan.
Dhab ahaantii dad badan oo ugu yaraan hal mar waxay joojiyeen guga iyagoo horay u ah dayrka beerta ama beerta, iyada oo aanad ku qanacsanayn sawir aan caadi ahayn - ubaxyo casaan ah, midab cadaan ah ama guduud ah oo ku yaal geedka qurux badan oo aan caleemo lahayn. Waxay kala duwantahay magnolia. Marka ugu horeysa waxay u egtahay in mucjiso noocaan oo kale ah lagu beeray beeraley khibrad leh, iyagoo maalgashanaya maaliyad badan iyo dadaal aad u badan.
Waa maxay dhirta geedka ee beerta
Genus Magnolia (laga bilaabo Laatiin Magnolia) - cirigii ugu da'da ahaa ee dhirta ubaxyada. Waxay ka tirsan tahay dad badan (in ka badan 120 nooc) qoyska Magnolia, kuwaas oo qaar ka mid ah ay yihiin baraf u adkaysta, sii kordhaya ee gobollada leh jawi kulul. Ma taqaanaa? Noocan caynkan ah waxaa u sabab ah Charles Plumier, oo u magacaabay sharaf ka mid ah xeeldheeraha Faransiiska Pierre Magnol.
Sida loola tacaalo cudurrada khudaarta
Ereteriya waxaa loo tixgeliyaa meesha lagu dhalo macaan. Waxay muddo dheer ku kori jirtay Hindiya iyo Shiinaha. Thanks to globalization, miro aad u fiican ayaa ku baahsan adduunka. Khudaar waa geed oo cudur u adkaysta, laakiin xaaladaha cimilada waxaa lagu saari karaa cudurro fangas ah oo kala duwan. Sidaa darteed, sii kordhaya geed khafiif ah beertaada, waxaad u baahan tahay inaad isu diyaariso dagaalka ka dhanka ah cudurrada dhaqankan.
Khudaar cufan ah: xannibaad sax ah iyo daryeelka sanadka koowaad
Qof kasta ugu yaraan hal mar noloshiisa, gaar ahaan carruurnimada, dhagaxyada dhulka lagu aaso. Koorsada waxay ahaayeen liin, liin, tufaax. Waxay koray sprouts, taas oo xataa siiyey dhowr caleemo. Laakiin ka dib dhowr bilood ka dib, midabka ama baadiyaha ayaa ku koray caleenta oo buuxa, oo aan midho dhalin dhammaan. Ma taqaanaa sida loo koro khudaar ka sameysan dhagax guri?
Siyaabaha abaarta soo go'aya ee jiilaalka
Man cuno abrikot kumanaan sano. Miraha macaanku waxay leeyihiin tayada dhadhanka sare waxayna si deg deg ah u daali kartaa dareenka gaajada, jidhka ku kobciya fiitamiino iyo xubno muhiim ah, sidaa daraadeedna waxaa loogu talagalay isticmaalka dhowr cudur. Margooyinku waxay leeyihiin waxyaabo kaloori hooseeya (100 garaam oo badeecada ka kooban 41 kcal oo keliya), taas oo u oggolaanaysa in ay cunaan kuwa isku dayaya inay qayb ka qaataan miisaan dheeraad ah.
Daryeelka guriga ee guriga
Mararka qaar dareenkeena waxaa soo jiidanaya geedo leh caleemo cagaaran oo cagaaran iyo miraha dhalaalaya. Waxay u muuqdaan kuwo soo jiidasho leh oo aan doonayo in aan isku dayo. Tani waa magac euol. Miyuu la mid yahay miraha la cuni karo eu magaciisa iyo meesha ay tahay in lagu magacaabo dhirta sunta ah ama daawooyinka? Euonymus wuxuu leeyahay in ka badan 200 nooc waxaana loo adeegsadaa naqshad beerta.
Waa wax aan suurtagal ahayn in la qiyaaso dhirta caleemaha caafimaadka leh iyo quruxda leh iyada oo aan la haynin waraabin dheeri ah, taas oo lagu fuliyo dabeecad la adeegsanayo tuubooyin. Waxaa jira noocyo farabadan oo kala duwan oo kala duwan oo aan u muuqan kaliya muuqaalka laakiin sidoo kale tayada. Maqaalkani waxaan ka hadli doonaa waxa ka wanaagsan ee lagu dooranayo tuubo loogu talagalay waraabinta, sida loo xafido oo u shaqeeyo.
Noocyada ugu caansan iyo noocyada yicibta
Almond waa geedka ama geed ku dhaca caanaha xayawaanka. Dhulka dhul-beereedka waxaa loo tixgeliyaa Mediterranean iyo Central Aasiya. Maalmahan waxaa lagu beeray Shiinaha, Mareykanka, Crimean iyo Caucasus, Ruushka, Slovakia iyo Czech Republic, Moravia. Almond caadiga ah Almond caadi ah wuxuu u qaybsan yahay laba qaybood: xayawaan (qadhaadh) iyo yicib macaan.
Xeerarka lagu dooranayo baakad beerta
Tirada badan ee qalabka loogu talagalay daryeelka dhirta beerta, baashaalku waa mid ka mid ah kuwa ugu caansan ee dareenka ah in xitaa dad yar oo xiiseynaya beerta si ay u fahmaan magaca qalabka loogu talagalay waxa loogu talagalay. Ma taqaanaa? Qaybaha ugu horreeya ee soo muuqday bilawgii qarnigii 19aad waxay la mid yihiin maqas-gooshi iminka ah waxaana loo adeegsaday jarista geedka canabka ah.
Kala saarista gooynta tubta: goosashada, rooting, beeritaanka iyo daryeelka
Beeraley kastaa waxay leedahay dhirta uu jecel yahay. Badanaa soo jiidashada ugu weyn iyo darling waxay noqotaa dabacsanaan macaan leh oo koraya beerta. Plum waa fiicantahay ma aha oo kaliya dhadhankiisa, waxa uu leeyahay waxyaabo badan oo bogsiinaya. Miro badani waxay ku badan tahay magnesium, birta, zinc, fitamiin C, iyo geeddi-socodka koritaanka waxay ku urursatey vitamin B2, kor u qaadidda dheef-shiid kiimikaad.
Meelaha dadka deggan ee xagaaga ah, waxaa sii kordhaya suurtagal ah in la arko dhirta qalaad ee aan caadi ahayn oo aan sameyneynin oo kaliya shaqeynta qurxinta, laakiin sidoo kale waxay keeni kartaa goosashada faa'iido leh. Sidaa darteed, in this article waxaan ka hadli doonaa mid ka mid ah dhirta kuwan, loo yaqaan isla markiiba dhowr "magacyo": zizifus, unabi iyo taariikhda Shiinaha.
Asalka Boric ee dhirta: sida loo isticmaalo qoryaha
Boric acid waa lagama maarmaan u ah dhammaan miro, khudradda, berrinka iyo dalagyada miraha. Ma aha oo kaliya ka ilaalinta microbes pathogenic, laakiin sidoo kale kordhisaa wax-soosaarkooda, ku kordhisaa kororka content sonkorta. Natiijadu waa mid macaan, tayo sare leh. Intaa waxaa dheer, dhirta la daweeyey ma yihiin kuwa la yiraahdo kallana, miraha midkoodna ma jabin qoyaanka xad-dhaaf ah.
Sartaha beeritaanka iyo daryeelka ee tunbergia
Tunebia waxay gasho acanthaceae qoyska. Waddankeeda waxaa loo tixgeliyaa inuu yahay kulaylka Afrika. Waxaa jira qiyaastii 200 nooc. Magaca dhirta ayaa lagu sharfay waagii hore ee Karl Peter Thunberg. Ubax ayaa weli leh magac kale - "suzane madow". Waxaan ugu yeeraa sidaa daraadeed midabka dhexe ee ubaxa - guduud madow.
Kordhinta qariirada Norway ee degaanka
Maple waa geed aad u caan ah. Waxaa laga heli karaa meel kasta: goobaha magaalooyinka iyo mareegaha, daaqadaha, cariishyada xagaaga. Waxay soo jiidataa dareenka sababtoo ah firfircoon qurux badan oo caleenta ah iyo taajkii, miraha aan caadi ahayn. Gaar ahaan quruxda dayrta, marka caleemaha ay ku rinji yihiin midabada dayrta iftiin leh: huruud ah, oranji, iyo guduud.
Waa maxay noocyada tubta ee ku habboon beerashada xaafadaha
Cherry plum, oo dad badani u arkaan inay noqoto dabacsanaan, ayaa si joogta ah ula xiriirta miyir-qabka koonfurta diiran. Oo waxaan rabay in tubta in ay ahaato mid degan gobolka Moscow, sidoo kale waxa lagu soo bandhigay noocyada ugu fiican. Noocyadaas ayaa la soo shubay oo keliya sababtoo ah tubaako, taas oo laga soo bilaabo tubta iyo gooyay. Hadda xayiraadaha xaafadaha waa sida ku habboon ee hoosaadka.
Cherry Bird: beeritaanka iyo daryeelka
Dad badan, khudradda shimbiraha ayaa had iyo jeer la xiriirta bilawga guga, maxaa yeelay waa cayayaanka oo buuxiya hawada cusub ee guga, iyo sida shimbirta shimbirta shimbiraha ay u dhiirrigeliso waxyi. Noockan noocan ah waa mid aan la qabin in la soo xulo ciidda la soo xulay, tayada, halbeegyada dabiiciga ah, iyo sidoo kale waraabinta iyo iftiinka.
Cunto-dhaqashada Agrotechnology ee "Stanley" ("Stanley"): noocyo caan ah, beerto iyo daryeel
Si aad u hesho goosashada wanaagsan ee dalagyada waxaad u baahan tahay inaad doorato kala duwanaanta saxda ah. Waxaa jira noocyo badan oo noocyo xiiso iyo caan ah. Mid ka mid ah waa Stanley Plum ("Stanley") - sharaxaad faahfaahsan oo ku saabsan noocyada kala duwan, iyo sidoo kale aasaaska beerashada, waxaa laga heli karaa arrintan. Taariikhda noocyada dhirta taranta "Stanley" Iskuduwaha "Stanley" waxay ka timid Maraykanka.